Jihan Saadaat : Xaaskii awoodda badneyd ee Anwar Saadaat | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Jihan Saadaat : Xaaskii awoodda badneyd ee Anwar Saadaat
Jihan Saadaat waxay u doodi jirtay xuquuqda haweenka
Jihaan Saadaat waa xaaskii madaxweynihii hore ee Masar Anwar El Sadaat, waxay Jimcihii ku geeriyootay cisbitaal ku yaalla maagalada Al Qaahira halkaas oo maalmo lagu daweynayay.
Jihan Saadaat waxay ku geeriyootay da’da 88, dadkii ka tacsiyeeyay geerida ku timid waxaa kamid ah madaxweynaha Masar Cabdel Fataax Al Sisi.
Jihan Sadat waxay masaafo yar u jirtay seygeeda oo ahaa madaxweynihii Masar xilli dabley ay rasaas ku fureen xillii uu daawannayay ciidamo gaado ka ciyaar kusoo bandhigayay Qaahira, dhowr rasaas ayaa haleeshay seygeeda Anwar Saadaat, labo saacadood kadibna wuxuu madaxweynaha dhawaaca kasoo gaaray weerarka, 6-dii bishii Oktoobar ayay aheyd xilliggaas, waxaana meesha ka baxay awooddii Jihan oo aheyd marwada koowaad ee Masar.
Waxay sanadkii 1933 ku dhalatay magaalada Qaahira, aabaheed wuxuu ahaa Masaari halka hoooyadeed ay kasoo jeeday Ingiriiska.
Jihan waxay wax ka dhigtay iskuuladii dowladda ee gaarka u ahaa gabdhaha, waxay si wanaagsan u baratay luqadda Ingiriisiga, Carabiga, Xisaabta iyo Seyniska.
Jihan waxay inta badan nolosheeda kusoo qaadatay arrimaha caddaallada iyo u doodidda xuquuqda dumarka Masar, waaana shaqo in muddo ah ay ku howlaneyd tan iyo markii la khaarijiyay seygeeda.
Jihan waxay Anwar Saadaat kula kulantay guriga ay qof ay qaraabo ahaayeen , wuxuu xilliggaas ahaa sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada, wax yar ka hor waxaa laga soo sii daayay xabsi kadib markii uu waday dagaal ka dhanka ah maamulkii Ingiriiska ee Masar.
Arooskii Anwar Saadaat iyo Jihan 29-kii bishii May 1949
Anwar markaa xaas hore ayay kala tageen, sanadkii 1949 ayay wada aqal galeen, waxay isu dhaleen afar carruur ah.
Jihan waxay ku biirtay jaamacaddii Qaahira si u barato suugaanta Carabta, waxay ka qalin jebisay 1978 halka shahaadada labaad ay ka qaadatay sanadkii 1980.
Sanadkii 1979 waxay seygeeda ku dhaadhicisay in uu ansixiyo xeer dumarka Masaarida loogu qoondeeyay 30 kursi golaha baarlamaanka.
Saddex sano kadib guurdkoodi, Anwar Saadaat wuxuu ku biiray kacdoonkii uu horkacayay Jamaal Cabdinaasir ee xilka looga tuuray boqorkii Masar ee taageerada ka helayay Ingiriiska, waxay wax ka baddaleen hannaankii siyaasadda Masar.
Anwar Saadaat xilal kala duwan ayuu dowladda kasoo qabtay markii dambe madaxweyne ayuu Masar ka noqday markii uu geeriyooday Jamaal Cabdinaasir sanadkii 1970.
Jihan waxay kaalin firfircoon ka qaadatay maamulak dowladda markii uu awoodda hayay seygeeda, xitaa waxay u raaci jirtay safaaradda dibadda uu ku tegayo Anwar.
Jihan waxay soo caanbaxday sanadihii 1960s markii ay waday olole ay ku dhiirigelineyso dumarka ku nool miyiga Masar gaar tuulada Talla oo ku taalla gobolka Nile Delta, waxay haweenka u sameysay ururro iskaashato si haweenka dhaqaala ahaan ay isugu tashadaan.
Anwar iyo Jihan oo ku sugnaa gurigooda ku yaalla magaalada Alexandria sanadkii 1972
Sanadkii 1978, Anwar Saadaat wuxuu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee kasoo jeedo dalalka Carabta ee heshiis la galo Israa’iil kadib dadaallo diblumaasiyadeed oo ku aadan heshiiskaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweyinihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter, isla sanadkaas Anwar iyo Ra’iisul Wasaarihii Israa’iil waxaa la siiyay bilabadda nabadda.
Heshiskaas wuxuu ka careeysiiyay dadweyne badan oo reer Masar ah, waxaana Masar ka dhacay dibadbaxyo rabshada wata oo looga soo horjeedo a
Previous articleSiyaasi Ramaax oo shaaciyey inuu Xisbiga Ucid ahaa Bas uu kiraystay Halkuu rabayna kaga degay
Next articleWargeys Caalamiya Oo Sheegay In Dawlado Maraykanku Ka Mid Yahay Hor Taagan Yihiin Qadiyadda Somaliland
Mareykanka: Itoobiya iyo TPLF waxay cunaqabateynta uga badbaadi karaan heshiis
ceelka cadaabta oo koox khuburo ahi gunta sootaabatey
Abwaan Shacir, Afku Haduu Siyaasada galo layguma haleeyo xamar iyo hargeysana lolana siyaasadeed aya ka dhexeeya laakiin anigu dhex qaadi mayo
Abwaan Shacir, Afku Haduu Siyaasada galo layguma haleeyo xamar iyo hargeysana...
8 qof oo maydkoodii talagad wali ku jiro,ayna dileen cidamada uganda...
Sawirro argagax leh” oo muujinaya ilaalada xudduudaha Mareykanka oo fardo saaran...
Emine Erdogan: Xaaska Erdogan maxay Soomaaliya uga shegetay buuggeeda cusub ee...
Madaxdhaqameedka Waxaan leeyahay Dhex Ka Noqda Siyaasada, Dadka Aad Madaxda Utihiin...
Aabe dacwad ku furay macalin timaha ka jaray gabadhiisa
Dalka suudan Afgambi fashilmay ayaa ka dhacay saaka waabrigii
Fahad Yaasiin oo xamar ka degay iyo Rooble oo khatar kale...
Ciyaartooyda u dhashay Jabuuti ee iska dhiibay Faransiiska
4 Million Oo Dollar Ayaanu Khasaarnay Sababtuna Waa” Hiliblayaasha Nafaqo
5 Berbera, Hadanu nahaey Mujahidiintii Laga Dumiyay guriga sooyal dahabshiil waanu...
Gudoomiye saleebaan,Qodabkan inaga daaya waxa ogol macalimiinta iyo waalidka Ardeyda